पाेखराकाे याे अस्पतालमा पैसा तिर्न नसक्दा २१ दिने शिशुलाई यसरी निकाले – Khula kura
पाेखराकाे याे अस्पतालमा पैसा तिर्न नसक्दा २१ दिने शिशुलाई यसरी निकाले
रकम बुझाउन नसक्दा पोखराको मणिपाल अस्पतालले २१ दिने संक्रमित शिशुलाई अस्पतालबाट निकालिदिएको छ । ९० हजार धरौटी र दिनको २२ देखि २८ हजारसम्म पैसा बुझाउन नसक्ने भएपछि अस्पतालले जानबहादुर बुढाका बच्चालाई नि कालि दिएको हो ।
वैशाख २३ गते मणिपाल अस्पतालमा जन्मिएका बालकमा जेठ १ गते सम स्या देखिएको थियो । परिवारले ती बालकलाई जन्मिएकै अस्पतालमा पु¥यायो । अस्पतालमा उनलाई एनआइसियुमा ३ दिन राखेर उपचार गरियो । तर उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएन ।
‘शुल्क सुन्दै डर लाग्ने, कहाँ तिर्न सकिन्छ र त्यत्रो ? पैसा तिर्न नसके लगिहाल्न भने,’
पुनः बच्चालाई जानबहादुरले १२ जेठमा अस्पतालमा भर्ना गराए । १३ जेठमा बच्चामा को रोना संक्र मण पुष्टि भयो । को रोना संक्र मित बच्चा राख्ने छुट्टै वाड नभएकाले मणिपालले राख्न गा ह्रो मानेको अस्पतालको स्रोत बताउँछ ।
बालकमा को रोना पुष्टि भएपछि अस्पतालले सुरुमा राख्नलाई आनाकानी गरेको जामबहादुर बताउँछन् । पछि राख्न मानेपनि निकै महँगो शुल्क सुनाएपछि आफूले बच्चालाई पश्चिमाञ्चल अस्पताल लगेको उनले बताए ।
‘शुल्क सुन्दै डर लाग्ने, कहाँ तिर्न सकिन्छ र त्यत्रो ? पैसा तिर्न नसके लगिहाल्न भने,’ उनले भने । अस्पतालसँग केही सहुलियत मागेपनि ठाडै अस्विकार गरेको उनले बताए ।
‘बच्चालाई प्याडियाट्रिक आइसियुमा राख्नु पर्ने अवस्था छ, तर बच्चाको अभिभावकले नमानेपछि मेडिकल अड्भाइस विपरीत बच्चालाई डिस्चार्ज गरिएको छ ।’
अस्पतालले डिस्चार्ज गर्दा उनको अवस्था ग म्भीर रहेको बताएको छ । डिस्चार्ज पत्रमा लेखिएको छ, ‘बच्चालाई प्याडियाट्रिक आइसियुमा राख्नु पर्ने अवस्था छ,
तर बच्चाको अभिभावकले नमानेपछि मेडिकल अ ड्भा इस विप रीत बच्चालाई डिस्चार्ज गरिएको छ ।’ बच्चालाई डिस्चार्ज गर्ने दिन उनमा उच्च ज्व रो, श्वा सप्रश्वा समा सम स्या थियो ।
स्राेतः समाधान न्युज, सांकीतिक
लिचीको दाना अड्किएर एक बालकको मृ;त्यु